Ahoana ny fandefasana horonan-tsary Twitter amin'ny iPhone | iPhone News
Ahoana ny fandefasana horonan-tsary Twitter amin'ny iPhone
Ignatius Room | | Fampiharana iPhone, Fampianarana sy torolàlana
WhatsApps dia lasa iray amin'ireo sehatra mandany toerana be indrindra amin'ny fitaovana rehetra, noho ny habetsahan'ny horonan-tsary sy sary zaraina isan'andro, indrindra amin'ny vondrona namana, mpiara-miasa...
Na dia tsy loharanom-baovao manan-danja amin'ireo horonan-tsary ireo aza matetika ny Twitter, eto amin'ity sehatra ity dia afaka mahita votoaty mahaliana kokoa hozaraina ihany koa isika. Rehefa mizara izany votoaty izany, ny fametahana ny rohy no haingana indrindra. Fa raha te-hitahiry azy amin'ny fitaovantsika isika, ny safidy tsara indrindra dia ny misintona azy.
Raha te hahalala ny fomba fampidinana horonan-tsary avy amin'ny twitter amin'ny iPhone ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehoy anao ny torolàlana feno amin'ny safidy tsara indrindra ho an'ny ecosystem finday Apple.
1 Miaraka amin'ny Shortcuts
4 TW Save
Miaraka amin'ny Shortcuts
Indray mandeha indray, noho ny fampiharana Shortcuts, tsy mila mametraka fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo izahay eo amin'ny fitaovantsika mba hanao asa manokana, raha toa ka tantanan'ny iOS 13 na dikan-teny manaraka izany.
Miaraka amin'ny app Shortcuts, azontsika atao koa ampidino ny famahana ny sary amin'ny iPhone, esory amin'ny horonan-tsary ny feo, mamadika sary ho PDF...
Miaraka amin'ny hitsin-dàlana TVDL (Twitter Video Downloader), azo alaina ao amin'ny East rohy azontsika atao misintona lahatsary avy amin'ny twitter.
Ny zavatra tsara indrindra amin'ity hitsin-dàlana ity (misy hafa azo alaina) dia mamela antsika hanao izany mifantina kalitaon'ny horonantsary, mba hampihenana ny haben'ny rakitra na hitazonana ny kalitaon'ny horonan-tsary avo indrindra.
Ankoatra izany, dia izany loharanom-baovao misokatra, ka na iza na iza mpampiasa azonao jerena ny fiasan'izy io.
Para misintona horonan-tsary twitter miaraka amin'ity hitsin-dàlana ity, tsy maintsy manaraka ireo dingana asehoko anao eto ambany izahay:
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mankany amin'ny bitsika hoe aiza no misy ny horonan-tsary tiana alaina.
Manaraka, tsindrio ny bokotra fizarana ary safidio ny Shortcut TVDL
Tamin'ny fotoana voalohany nanaovany azy, dia hangataka alalana aminay hifandray amin'ny tvdl-api.saif.dev. Tsindrio eo Avelao foana mba hisakanana anao tsy hanontany anay indray amin'ny ho avy.
Manaraka, hanasa antsika ny fampiharana mifantina kalitaon'ny horonantsary. Arakaraky ny avoakan'ny kalitao, ny toerana bebe kokoa hipetrahany amin'ny fitaovantsika.
Manaraka izany dia hanontany antsika indray ny fahazoan-dàlana hifandray amin'ny tranonkala izay hisintonana ilay horonan-tsary video.twimg.com. Tsindrio eo mamela.
Raha efa nampiasa hitsin-dàlana izahay teo aloha izay nangataka alalana taminay hidirana amin'ny fampiharana Photos, ity hitsin-dàlana vaovao ity, tsy hangataka izany intsony.
Ity hitsin-dàlana ity dia miasa amin'ny alàlan'ny fampiharana Twitter ofisialy sy amin'ny Twitter. fangatahana antoko fahatelo.
Ho fanampin'ny fampiharana Twitter ofisialy ho an'ny iOS, ao amin'ny App Store ihany koa afaka mahita fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo isika izany ihany koa no ahafahantsika miditra amin'ny Twitter, ka manala ireo doka marobe asehon'ny sehatra.
Twitterrrific dia iray amin'ireo fampiharana ireo. Ity fampiharana ity, mamela antsika misintona horonan-tsary avy amin'ny Twitter mivantana nefa tsy mila mampiasa rindranasa an'ny antoko fahatelo, hitsin-dàlana amin'ny fitendry, pejy web...
Mba télécharger a Lahatsary Twitter amin'ny iPhone na iPad miaraka amin'ny Twitterrific, tsy maintsy manao ireo dingana asehoko anao eto ambany izahay:
Voalohany indrindra, nandeha tany amin'ny bitsika izay misy ny lahatsary.
Manaraka, tsindrio ny lahatsary mba manomboka playback.
Rehefa nanomboka ny playback, tsindrio ary mihazona ilay horonan-tsary mandra-piseho ny menio fizarana iOS.
Farany, mifindra any amin'ny safidy isika Tehirizo video.
Ny horonan-tsary dia alaina ho azy ary dia hotehirizina ao amin'ny fampiharana Photos ny fitaovantsika.
Twitterrific dia misy ho anao misintona maimaim-poana ary misy doka. Afaka manaisotra ny doka isika amin'ny fandoavana famandrihana isan-taona na amin'ny fividianana ny fampiharana mandritra ny androm-piainana.
Twitterrific: Tweet ny lalanaomaimaim-poana
Iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra azo alaina amin'ny iOS misintona horonan-tsary amin'ny sehatra rehetra Amerigo izany. Miaraka amin'ity rindranasa ity dia afaka maka feo amin'ny horonan-tsary ihany koa isika, mamadika rakitra audio amin'ny endrika hafa, miditra amin'ny sehatra fitahirizana rahona...
Raha efa mpampiasa an'ity fampiharana mahafinaritra ity ianao dia hasehoko anao ny dingana tokony harahina misintona horonantsary Twitter:
Voalohany indrindra, tsy maintsy kopia rohy bitsika aiza no misy ny video tiana alaina.
Manaraka, manokatra ny fampiharana izahay, miditra amin'ny navigateur ary Apetaho amin'ny bara adiresy ny adiresy.
Rehefa feno ny bitsika, ary manomboka milalao ny horonan-tsary, ny fampiharana dia hanasa antsika hisintona ny video.
Mamela antsika ny fampiharana safidio ny fanapahan-kevitra video eo anelanelan'ny safidy samihafa. Mifidy izay tiantsika isika dia izay ihany.
Tsy toy ny fampiharana hafa, Amerigo mitahiry ireo horonan-tsary alaina rehetra ao amin'ny app, tsy ao anatin'ny Photos. Mba hidirana amin'ilay horonan-tsary sy hizarana azy dia tsy maintsy tsindrio ny kisary globe (zoro havia ambany) isika.
Mba hizarana izany dia tsy maintsy gazety lava amin'ny horonan-tsary resahina mandra-piseho ny menio safidy.
Amerigo File Managermaimaim-poana
Amerigo - Mpitantana rakitra€ 17,99
Ny kinova aloa Tena lafo izany, na izany aza, dia tsy vitan'ny hoe mamela antsika misintona horonan-tsary amin'ny sehatra rehetra, fa mamela antsika koa:
Midira amin'ny sehatra fitahirizana rahona Dropbox, Google Drive, OneDrive ary iCloud ho fitahirizana rakitra lavitra
Mitadiava amin'ireo atiny rehetra ao amin'ny fampiharana sy amin'ny sehatra fitahirizana rahona.
Compression (amin'ny endrika zip) sy decompression (amin'ny endrika zip sy rar) ny rakitra.
Tonian-dahatsoratry ny rakitra PDF hanampiana fanamarihana sy sonia.
Fanohanana ny rakitra Microsoft Office rehetra.
Arovy amin'ny PIN ny lahatahiry.
TW Save dia fampiharana maimaim-poana tanteraka (misy dokam-barotra sy fividianana 1,99 euros hanesorana azy) izay azontsika atao misintona horonan-tsary avy amin'ny twitter.
Tahaka an'i Amerigo, voatahiry ao amin'ny app ny horonan-tsary rehetra, izay ahafahantsika mizara azy ireo amin'ny fampiharana hafa na mandefa azy ireo amin'ny fampiharana Photos.
Raha tsy tianao ny iray amin'ireo vahaolana ireo dia safidy hafa mahaliana ny mampiasa ny iray amin'ireo pejy web samihafa izay ananantsika misintona horonan-tsary avy amin'ny twitter.
Mba hampiasana an'io sehatra io dia mila fotsiny isika apetaho ny rohy bitsika izay efa nadikay teo aloha tao anaty boaty lahatsoratra Ampidiro rohy video ary tsindrio ny Download.
Manaraka, ny vahaolana samihafa fa ity sehatra ity dia manolotra antsika hisintona ny video. Raha hifidy izay mahaliana antsika indrindra, eo ankavanan'ny vahaolana, tsindrio ny bokotra Download.
Farany, hanomboka haseho amin'ny fanapahan-kevitra nofidianay ilay horonan-tsary. Mba hisintona azy, amin'ity indray mitoraka ity eny, tsindrio ary hazòny ny video mandra-piseho ny bokotra Tehirizo horonantsary.
Ny fomba rehetra asehonay anao ato amin'ity lahatsoratra ity dia manan-kery amin'ny fampidinana horonan-tsary ao anaty sioka. Raha ny bitsika rohy mankany amin'ny lahatsary avy amin'ny sehatra hafa, ny hany fampiharana azonao ampiasaina amin'ity lisitra ity dia Amerigo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ahoana ny fandefasana horonan-tsary Twitter amin'ny iPhone
Azonao atao izao ny mijery ny sarimihetsika fohy nataon'ny talen'ny Park Chan-wook amin'ny iPhone 13 Pro
GeForce NOW dia mitondra ny lalao PC tsara indrindra amin'ny iPad, iPhone ary Mac